C obhekwe entwasahlobo zokuqala ezingu, balimi, egijimela amasayithi abo aqala ukucubungula lihlala. Futhi uma isayithi ukhule amajikijolo, ukuthi enkingeni enjalo uhlale egcwele. Futhi ikakhulukazi eziningi umzamo nokunakwa edingekayo ukucutshungulwa strawberry ngasekuqaleni kwentwasahlobo. Ngemva isivuno ocebile kuncike ngokuyinhloko ukunemba umsebenzi entwasahlobo in the imibhede.
strawberry Ukunakekela kwentwasahlobo kuyadingeka ikakhulukazi umphumela eyisisekelo kunazo - isivuno esihle. La majikijolo kuyinto kwendle kakhulu engadini isiko. Iningi lalabo abathatha uhlangothi Uthanda ukuyidla nini, kodwa ungalokothi bona abawona wahlanganyela ingadi, bakholelwa ukuthi kwanele nje ukutshala izithombo engadini yemifino, ulinde kancane, futhi isivele kungenzeka ukuvuna.
Eqinisweni, uma ungazi kanjani ukuthi iphathe strawberry Entwasahlobo, ukutshalwa yayo kungaletha lutho kodwa usizi, hhayi okumnandi namanzi amajikijolo abomvu. Isiko kunzima kakhulu ukhula. Yena udinga njalo Ukunquma amadevu bese uzama ukuthola amahlamvu ezindala ungagxambukeli sikhule entsha, njll Kodwa uma ekugcineni ziba ncane kakhulu, futhi izithelo futhi akusho uvuthwe, kusho into eyodwa kuphela .. wengadi bengayiqondi ngokugcwele, indlela yokunakekela strawberry entwasahlobo. Kufanele ukuthi umsebenzi ihlala kuze ekupheleni kwekwindla.
Ngemva ebusika obubanda
Ngokuba ukuthuthukiswa ezivamile sitrobheli entwasahlobo uma ukutshala ukhethe libalele futhi enokwethenjelwa evikelekile emoyeni, lapho inhlabathi ocebile izakhi mkhondo. Nakuba lokhu berry akakwazi ngokuthi aqine, kodwa ikakhulukazi yokuqothulwa izitshalo ubudala futhi kakade athuthukile, kuyilapho abasha ikakhulukazi ukusinda phakathi nenkathi ebandayo. Kulokhu, udinga ukwazi ukuthi ekuqaleni batshala noma izitshalo zife kudalulwe angaba abulawe yisithwathwa.
Okufanele ukwenze nge strawberry entwasahlobo
Noma ubani oke waba watshala imifino, izithelo noma izimbali, uyazi ukuthi kusukela ngoMashi, nsuku zonke, kuze kube sekupheleni May, ku-akhawunti. Lesi sikhathi kubalulekile ngezinye izikhathi ukuze anakekele eziningi amajikijolo. Udinga ukwazi indlela anakekele strawberry entwasahlobo. Inqubo ukwelashwa futhi kuhlanganisa ukususa amahlumela ngonyaka odlule kanye namahlamvu, futhi control inkathazo futhi ukuvundiswa, futhi ukuthambisa.
Ukuhlanza ziba ngcono
Bokuqala umsebenzi ingxenye kumele ukuhlanzwa. Indlela ukusingatha strawberry entwasahlobo? Kumelwe okokuqala ehlohla ngokucophelela amahlamvu ngonyaka odlule emaqenjini. Ngesikhathi esifanayo, uqaphele ukuthi ngeke ukwazi ashise amahlamvu noma kunjalo, ngoba izimila ezomile okhulula kuyingozi kakhulu izidakamizwa - dioxin. Ngakho-ke, kuwukuhlakanipha ukuba zonke ngonyaka odlule podsypku nezilokazane overwintered ngempumelelo kube lula ukwakha futhi uthathe. Abalimi abanolwazi bayazi ukuthi inzuzo yokuhlanza sikabili: okokuqala, iningi libhujiswa izinambuzane, futhi okwesibili, izimpande baqala ukuxoxa kangcono ngaphansi okwamanje eqinile Mashi ilanga.
Ngaphambi strawberry Entwasahlobo isibambo, ngokushesha ngemva ngokuletha imibhede ngokulandelana badinga ukuba athambise ngokucophelela. Awukwazi ukushiya ngaphandle ukunakwa kanye emizileni phakathi kwawo. Ngesikhathi esifanayo ziba ngcono isidingo ukususa futhi sekukhona ukhula kanye yokuqedela, ukukhiqiza umquba.
ukuphathwa Chemical sitrobheli entwasahlobo yokulwa izinambuzane
Ngemva ziba ngcono kanye Ukukhipha ngaphambi nje kokuba amajikijolo zom, kanye nangemuva kokuvuna eyenziwa nemisebenti lehlose amakhemikhali processing plant ezifana "uKhesari" noma "Taurus". Phakathi ukubonakala esibelethweni, noma kubutsela amajikijolo wasebenzisa izindlela - umkhiqizo yemvelo "Akrofit". Uma kwenzeka uma sezihlahla kukhona amahlamvu eziningi kangaka ezomile, indlela efanele kulawula izinambuzane is ukuguquguquka sitrobheli emasimini ngakolunye, indawo isala ihlanzeke. Elinegciwane embhedeni beveled futhi olufuthwe nge wokulungiselela chemical ukuvimbela isifo bamba yonke ingxenye. Lapho ukutshala kubalulekile ukusebenzisa ahlanzekile, kungabibikho monakalo material plant.
Strawberry Icubungula entwasahlobo Kuyasiza izitshalo alulame kalula ngemva ebusika. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ukuhlanza sezihlahla of namahlamvu omile. Uma lokhu okudingekayo zisuswe ungqimba engenhla inhlabathi iwe ukuthi strawberry mulched. emazweni akude ezimbili noma ngamasentimitha amathathu abaziphethe omningi izinambuzane ezehlukene, semboza ngabo izithombo zezihlahla bazinza ebusika. Akubalulekile kusukela entwasahlobo cishe the hlahla uthele ungqimba obukhulu inhlabathi, ngoba rostochku kulokhu kuyoba isikhathi eside ngokwanele ukuba izitike ukukhula. Ngakho, amajikijolo ungaba uvuthwe nge umxhwele ngasekupheleni.
Abanye abalimi yayo indlela ekhethekile indlela yokunakekela strawberry entwasahlobo. Siqukethe e yokuthi abazi uhlanze podsypku ekwindla. Kulokhu, ochwepheshe ukweluleka ukuze kuhlukaniswe ngokucophelela yezinto, kuze amasentimitha eziyisikhombisa ukujula. Bese ngokushesha kakhulu ku amajikijolo namanzi Iyomisa ukuthi wayezithanda izingane nje kuphela kodwa futhi abadala. Kuphela lokhu entwasahlobo ukwelashwa sitrobheli ngokuhlanganyela ohambisana imizamo yakhe, yena uzakuvuza obala wensimu sokuvuna kakhulu.
Qiniseka ukuchitha ngalesi sikhathi semboza ngabo izithombo zezihlahla kanye nomanyolo ukunikeza izitshalo. Ukuze wenze lokhu, ufafaze imibhede sawdust noma emapheshana encane. Ngezinye izikhathi zisebenzisa isikhunta ezivamile, ukugqoka umquba, kuhlanganise i-nitrogen.
Abalimi abanolwazi kakade kahle indlela ukusingatha strawberry Entwasahlobo, kunconywa ngaphambi inqubo zom fafaza sezihlahla nge isixazululo of urea. It is okulungiselelwe diluting 30 g of material 10 amalitha amanzi. ukucutshungulwa ezinjalo strawberry entwasahlobo cishe ingxenye yesine kwandisa umkhiqizo walo.
Lapho ingozi kungenzeka yesithwathwa qiniseka unakekele ukuphepha umkhiqizo wokuqala. Nge zinsongo ukuhlenga ukutshala amajikijolo kudingeka ukuba ngibheme ukungcola: evutha utshani noma namahlamvu omile. Futhi ukuze uqale lo msebenzi kuyadingeka ngaphambi frost kusukela ebusuku bese uqhubeke cishe kuze kwelanga.
amahlamvu amadala sitrobheli kwezitshalo is hhayi Kunconywa ukuba kususwe ngokushesha. Lungile balinde kuze amahlumela abancane beze. Umbala wawo, esikhundleni salokho, iyisiginali etshela okuvela ngowokuqala yokudla isidingo. It is a uhlobo zokunakekela for strawberry ngasekuqaleni kwentwasahlobo. It ibhalwe kanje: 10 l yamanzi ukuncibilikisa isipuni ammonium sulfate amabili izinkomishi mullein ketshezi. isitshalo ngasinye kufanele uthole 1,000 mg yokudla.
Ngaphambi zom amajikijolo eziningi kuhlanganise strawberry kudingeke ukuba usebenzise esinye isixazululo: chaza desyatilitrovoy isitsha isipuni encane potassium sulfate ngezibuko ezimbili nitrophosphate. Ukunisela lokhu uhlelo nelinye ehlathini, ukuchitha for isigamu ilitha yokudla.
Abalimi abanolwazi bayazi indlela yokunakekela strawberry entwasahlobo. Ziyakwazi nesomiso kanye, ngaphambi kokuqala nezihlahla eziqhakazayo lalinamanzi amaningi. khona-ke kumelwe kwenziwe kuphela uma kunesidingo amanzi. Futhi imibhede ngaphambi izimbali kungcono amanzi ukufafaza indlela eshiya kangcono athuthukile. Esikhathini esizayo, kuphela inhlabathi uhlala oswakanyiswe.
Kulawo masayithi, ogama abanikazi ukwazi indlela anakekele strawberry entwasahlobo, ne ukusetshenziswa ezanele kukamanyolo nokuvikelwa abanekhono yokulwa izinambuzane ezehlukene izitshalo luyoqina futhi amelana isifo. Ngeke nje kuphela kube lula ebusika, kodwa futhi lokulungisa abandayo. Ngemva frost ngeke kubenze phi hlungu.
Strawberry ebusika ongakwazi ukumelana namazinga okubanda afinyelela ku-degree amathathu Celsius ebukhoneni iqhwa ungqimba 20 cm. Uma kancane iqhwa, izitshalo ngisho ngaphansi nqabela kancane buthaka imikhuhlane ngisho nokufa. Uma iqhwa uwile kancane kakhulu, bese ukutshala entwasahlobo, uvikelekile ngotshani, kubalulekile ukuvula, futhi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukugwema ukubonakala amagundane.
Kodwa lo msebenzi akugcini lapho. abatshali abaningi babuze miphi ukucubungula strawberry ngasekuqaleni kwentwasahlobo. Izazi zikholelwa ukuthi ngemva ukubukeka amahlumela amasha kanye namahlamvu ngaphansi berry kuyadingeka ukwenza isixazululo sodium sulfate nge mullein, futhi ekuqaleni kuka-May - umquba amaminerali. Futhi uma izinso ukuncibilikisa imibhede ukuba aphathwe ngethusi sulfate. Ukwazi lokho fafaza strawberry entwasahlobo, ungagwema izifo eziningi.
Ukunisela amajikijolo, kuyatuseka ukuba afeze kanye ngesonto, ebusuku noma ekuseni. Ochwepheshe batusa ukusetshenziswa se drip irrigation eyenzeka: kulesi simo, amanzi ngeke kuwele phezu isitshalo, ilanga ngeke alishise, nesitshalo uzofa. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuqapha ukuvela ukhula. Nakuba semboza ngabo izithombo zezihlahla ayivumeli ukhula iqhume, nokho balahle kubo kufanele niqaphele kakhulu ukugcina amanzi mahhala ukuze uthole ohlelweni impande. Uma endaweni oyokwenziwa ukunakekelwa ngonyaka ngokucophelela strawberry ngasekuqaleni kwentwasahlobo, ungaqiniseka ukuthi amajikijolo ezinkulu, futhi ngenxa yalokho, okungukuthi, sokuvuna, qiniseka ukujabulisa yobuningi bayo.
Ukuze ukwelashwa sitrobheli entwasahlobo isidingo:
zibalwa njengothuli lwesilinganiso;
Zikamanyolo udinga Thenga kakhulu inkukhu droppings, mullein, i-potassium nitrate, "NPK" noma ezinye kusaladi amaminerali, nesibabule Colloid, "fitosporin" nezinye izidakamizwa ukuze silwe izifo kanye izinambuzane.
Izinhlobo strawberry, fruiting ngo kwentwasahlobo
Kunezinhlobo eziningana strawberry ihlukaniswa ngokweminyaka ngesikhathi kokuthola isivuno:
I-June. Izithelo e kwentwasahlobo, unikeza omningi amajikijolo, kodwa likwazi inezici ezithile ezingathandeki. Amajikijolo zivele kuyo kanye kuphela. Ngaphezu kwalokho, ngonyaka wokuqala kubalulekile azisuse zonke izimbali ke wanamathela isitshalo.
Unyaka wonke. Eqinisweni, kuletha isivuno wonke kuphela entwasahlobo and ekwindla, kanti ngo-June kubalulekile ukukhetha off izimbali ukuba ekwindla isitshalo again pokrylos amajikijolo.
Strawberry Icubungula kuvela isifo hhayi kuphela kulondoloza nezitshalo sokuvuna, kodwa kwandisa ke. Umthetho osemqoka balimi: zokuvimbela kangcono isifo, kunokuba ekulweni naso.
isikhunta Grey kwentwasahlobo
Kukhona inombolo kahle esikhulu izifo ezithinta kuhlanganise strawberry. Phakathi kwabo, kuvamile grey isikhunta, okuyinto kubhekwa ngempela eziyingozi fungal isifo. Yena livela ne sezulu elina epholile eside. Izindlela zokubhekana nayo botrytis entwasahlobo ukubhujiswa izitshalo onesifo imibhede, ngoba umoya noma imvula, lesi sifo kule nsimu.
Kulokhu, udinga phambi imbali ukucubungula ithusi oxychloride ngesisekelo: isipuni engamalitha amanzi ngasinye. Ngayinye imitha skwele ezindaweni ezithintekile badinga angu ayizinkulungwane yesixazululo. Indlela yokwelapha esebenza yesibili Kwenziwa emva iqoqo lokugcina strawberry - ngamalitha eziyishumi lamanzi chaza ezimbili wezipuni zethusi oxychloride nensipho ketshezi.
Okunye isifo - ukubeka amabala, okungaba mhlophe, ensundu nsundu. Lesi sifo livela ihlobo noma ekwindla. Amahlamvu zalesi sihlahla eqala ukukhula ensundu ekugcineni ewa. Uhlushwa isifo kabili: ngasekuqaleni kwentwasahlobo, kufafazwe amahlamvu nokucubungula luningi ngemva kokuvuna sokugcina.
Indlela yokubhekana izinambuzane entwasahlobo
Abalimi abaningi phambi umhlaba uthenge izithombo, qiniseka ukubhekana naso. Kuze kube yimanje, it is sehliselwe imizuzu eyishumi nanhlanu amanzi kuqhathaniswa esishisayo (lokushisa esiphezulu degrees amane nanhlanu), izinambuzane, uma kukhona, wafa. Ukutshala ezihlabayo, kudingeka siqiniseke ukuthi ibanga phakathi izitshalo kwaba ngaphezu amathathu, futhi phakathi imigqa - hhayi amasentimitha ngaphansi kuka ayisikhombisa.
Entwasahlobo, abanye abalimi wafutha sitrobheli yabo ipulazi benomhluzi utamatisi amahlamvu. Ilungiselela umhluzi ne namanje ukhothamele amakhilogramu kuvuna utamatisi oluhlaza egcwele ngamanzi afudumele, kahle wafaka. Khona-ke, abilisiwe, kuhlungwa, le mithi ingezwe insipho.
Hhayi kangako ku nezilokazane sishaye ithinta sitrobheli nekufakwa dandelion. amahlamvu Fresh lokhu ukhula ezikhulayo yonke indawo kugaywa futhi ugcwale amanzi pyatidesyatigradusnoy. Khona-ke ngemva kwamahora ambalwa, zonke wafaka, kutshengisa ukuguqulwa kwezinto ezinyakaziswayo, elihluziwe. Isixazululo wafakwa wafutha namahlamvu sitrobheli.
Umshini Pawnshop uhlala Wena
Gel Coatings «Ibhizinisi» - ukukhetha Iyafaneleka owesifazane yesimanje